नेपाल एग्रोको आईपिओ बाँडफाँड भोली, कतिको भाग्य बलियो ? — Motivatenews.Com
नेपाल एग्रोको आईपिओ बाँडफाँड भोली, कतिको भाग्य बलियो ?
काठमाडौं – नेपाल एग्रो लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आईपिओ मंगलबार बाँडफाँड हुने भएको छ । लघुवित्तको शेयर बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ्गको कार्यालयका अनुसार मंगलबार विहान ९ बजे आईपिओ बाँडफाँड हुनेछ ।
बिक्री प्रबन्धकका अनुसार धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका बमोजिम १५ हजार १२० आवेदकले मात्र गोलाप्रथाबाट उक्त शेयर प्राप्त गर्नेछन् । यो बैध आवेदकको ४.८० प्रतिशत मात्र हो । बैध आवेदकको ९५.२० प्रतिशत अर्थात दुई लाख ९९ हजार ८०५ आवेकदको हात खाली हुनेछ।
आईपिओमा कूल ३ लाख १५ हजार ६३० आवेदन परेकोमा ७०५ आवेदनबाट परेको १४ हजार २६० कित्ताको आवेदन रद्ध भएको नेपाल एसबिआई मर्चेन्टले जनाएको छ । जसमा तीन लाख १४ हजार ९२५ आवेदकबाट परेको ६३ लाख ८८ हजार १३० कित्ताको आवेदन सदर भएको थियो।
२०७६ बैशाख १६ गते प्रकाशित